Isitayela Ethnic ingaphakathi yesimanje
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi isitayela yobuhlanga esetshenziselwa umhlobiso ingaphakathi, ebizwa nangokuthi isitayela "abantu", "exotic", "ethnics". Lapho usebenzisa sihlelwe ukubeka izici ezihlukahlukene zokuthambekela decor kuya esiphezulu, okuyinto bakwazi ukucabanga nokuhlaziya hhayi kuphela kwamasiko, kodwa futhi izici zomlando ithi ezithile noma izizwe. Inhlanganisela Motifs ezahlukene wendabuko ingaphakathi ivumela le ukwakha engavamile isitayela izimo ezivumelana ukucwiliswa in isiko, futhi kusukela ngo-ezizwe ezihlukahlukene.
Kuyaziwa ukuthi yobuhlanga isitayela elingaphakathi isetjentiswe engaphezu kweyodwa leminyaka ukhona, kodwa akazange alahlekelwe ngokuhlathulula ukusebenza kwawo. Kaningi esetshenziswa kokuqeda amafulethi itshe lebekiwe isitayela eduze ngangokunokwenzeka ukuze emthonjeni wokuqala. Amathuba ethnics ngenkuthalo esetshenziswa abakhulekeli kwekuheha kanye exoticism ukudala Decor izinto ezithile eziphilayo zokuqala evumela bazogcwalisa umbala nezindlu isiko olulodwa. isici esibalulekile saleso izenzo elingaphakathi yokuthi ungakwazi kudlule amandla afanele ngokusebenzisa efanele Ukukhetha ezahlukene imibala, izinto, ubujamo, ifenisha, kanye nezinye izinto ezisetshenziselwa umhlobiso. isitayela Ethnic akubalwa embonweni ephelele ezinjenge noma ukuguqulwa izindawo.
Uma sikhuluma izinto ezifanelekayo ilungiselelo wezangaphakathi, bona zihlukahlukene njengezinkolelo izici kazwelonke kombuso noma isiko ehlukile. Imibala ingahluka kakhulu kuye ngokuthi isiko elithile wakhethwa njengosuku isisekelo somklamo.
I Interiors yobuhlanga kumele wenza ngendwangu ezingokwemvelo nasezintweni zokwakha ekhiqizwa kuleli zwe. Lokhu kungaba itshe, ngamapulangwe, uqalo, ukotini, usilika, nelineni, uvolo nezinye izinto zokwakha futhi izindwangu. Ngaphambi kokuthi uqale inqubo yokubhalisa yokuhlala, kuwufanele ukufunda izincwadi mayelana ngezwe nangamasiko lapho unqume ukuba abeke, kufanele sigxile izinto zangamalanga yayo, amasiko, izindwangu kanye ifenisha.
Kuthiwa ungubani yobuhlanga siyindlela elula kakhulu imvume cafe, bar noma yokudlela, njengoba kuvumela ukudala isimo afanele izivakashi. Ukwenza indawo ngale ndlela kungaba yinkinga ngaphezulu, njengoba ukucwiliswa ngokuphelele isiko kwesinye isizwe kungaba yinkinga kakhulu amathuba okuba indoda ojwayele ukuba siphile ngaphansi kwezimo ezingafani nhlobo. Ngaphambi kokwenza isinqumo sokugcina design wezangaphakathi emoyeni wezwe, kufanele kahle cabanga indlela kuyoba esilungele wena.
Okokuqala, ungakwazi iphendukele ukuklanywa igumbi elilodwa endlini yezwe lapho kwenzeke hhayi kaningi kakhulu. Hlala emaqaqasini isikhathi esifushane eside singaba ezithakazelisayo kakhulu futhi ewusizo ngawe. Ungakwazi ukuhlela ngisho nje ekhoneni olulodwa egumbini, okuzokwenza diversify ingaphakathi eyinhloko egumbini.
Ikhishi Provence isitayela - induduzo kalula
Umklamo ehholo efulethini: cabanga ongakhetha
Igumbi nomklamo emantombazaneni asemasha - njengoba kufanele kube njalo?
Gidrostrelka kuya ngalendoda of: Ekhiqizako idayagramu umdvwebo, ukusetshenziswa nezilinganiso
Indlela ukususa kudvwebela ebomvu "uLizwi": isixazululo elula inkinga
"DotA 2" iphakama engemuva - ukunikeza ophikisana naye udlale umdlalo wabo